RIYAAD, Qaar ka mid ah tuugo qaab la yaab leh kharash badan uga dhacay mashiin lacag qaad ah oo la qabtay (Dalalka ay u dhasheen) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka RIYAAD, Qaar ka mid ah tuugo qaab la yaab leh kharash badan...
RIYAAD, Qaar ka mid ah tuugo qaab la yaab leh kharash badan uga dhacay mashiin lacag qaad ah oo la qabtay (Dalalka ay u dhasheen)
(Riyaad) 22 Maarso 2020 – Booliiska Sucuudiga ayaa xabsiga dhigay 5 ka mid 11 tuug oo ku eedaysan inay jabsadeen mashiinka lacag qaadka ah (ATM) ee Bankiga Arab National Bank faraciisa degmada Al-Jazirah oo ku taalla koonfurta caasimadda dalkaas.
Nimankan ayaa dhacay lacag kaasha ah oo dhan SR1.4 milyan oo Riyaalka Sucuudiga ah ($373,333 doollar).
6 ka mid ah raggan oo ah tuugada heerka sare ah ee agaasiman ayaa ka baxsaday Sucuudiga kaddib dhaca Bankiga oo ku beegnaa 15-kii Febraayo, iyagoo la fakaday nus milyan Riyaal (SR500,000), sida uu sheegay afhayeenka Booliiska Riyaad Gaashaanle Shaker Bin Suleiman Al-Tuwaijri.
Qaybta dembi baarista Sucuudiga ayaa bar gartay raggan, kuwaasoo ay ku jiraan 4 Masaari ah, mid Bulgarian ah, mid Russian ah, oo ay wehliyaan 3 Sucuudi ah iyo mid Yamai ah.
Ragga la qabtay ayaa lala hayaa gaari ay ku wateen SR700,000 oo Riyaalin, iyadoo la raadinayo 6-da kale iyo kaasha ay la baxsadeen, sida uu sheegay Al-Tuwaijri.
Previous articleCaabuqa corona oo ku dhacay qofkii ugu caansanaa ee Soomaali ah + Sawirro
Next articleWAR CUSUB: RW Jarmanka ee Angela Merkel oo la karaantiilay! (Dhakhtarkeedii oo buka)